Maraykanka Oo Markii Ugu Horreysay Ku Baaqay In La Joojiyo Dagaalka Ka Socda Dalka Yemen Iyo Xabad-Joojin Deg Deg Ah – somalilandtoday.com
Maraykanka Oo Markii Ugu Horreysay Ku Baaqay In La Joojiyo Dagaalka Ka Socda Dalka Yemen Iyo Xabad-Joojin Deg Deg Ah
(SLT-Washington)-Maraykanka ayaa markii ugu horeysay ku baaqay in la joojiyo dagaalka ka socda wadanka Yemen, kuna baaqay Xabad-joojin deg deg ah.
Xoghayaha Gaashaandhiga Maraykanka James Mattis ayaa sheegay in loo baahan yahay in si deg deg ah xabada loo joojiyo isla markaana aysan sii eegan doonin dagaalka dabada-dheeraaday ee ka socda wadanka Yemen.
“…Waa in xabad joojintan in la dhaqan geliyaan muddo 30 maalmood gudahood ah…” ayuu yidhi James Mattis.
Warkan ayaa kasoo baxay Maraykanka kadib markii la ogaaday in Sacuudiga iyo Imaaraatiga wadaan duulaan cusub oo ku wajahan magaalada Xudeydah oo ay u direen ciidamo gaaraya 10.000 askari oo ay ku jiraan ciidamo laga keenay dalka Sudan.
Sidoo kale war uu soo saaray Xoghayaha Arrimaha Dibada ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa lagu sheegay in Xulafada Sacuudiga ay joojiyaan Duqeynta ay ka wadaan dalka Yemen, isla markaana la dhaqan geliyo xabad joojin.
Mike Pompeo ayaa ugu baaqay xulafada Sacuudiga iyo Xuuthiyiinta in ay tagaan shirka ka dhici doona Sweden bisha soo socota ee November oo uu soo qaban qaabiyey Ergayga gaarka ah ee UN-ka u qaabilsan Yemen, Ambassador Martin Griffiths.
Baaqa Maraykanka ayaa la xariira cadaadiska xukuumada Maraykanka todobaadyadii lasoo dhaafay kaga imaanaya hay’adaha xaquuqul insaanka iyo Waliba Kongareeska Maraykanka kadib dilkii Sacuudiga u geystay suxufi Jamal Khashoggi ee ka dhacay Qunsuliyada Sacuudiga ee Istanbul.
Militariga Maraykanka ayaa ka caawiya xulafada Sacuudiga ee duqeynta ku wada Yemen dhinaca shidaalka diyaaradahooda dagaalka iyo waliba hubka ugu badan xulafada ayaa ah mid ay kasoo gateen dalka Maraykanka, waxaa taasi usii dheer wuxuu Maraykanka ka caawiya Sacuudiga dhinaca sirdoonka iyo xogdoonka goobaha ay duqeeyaan.
Diyaaradaha dagaalka ee Sacuudiga ayaa loo heystaa inay dalka Yemen ka geysteen xasuuq badan kadib markii bartilmaameed ka dhigteen goobaha shacabka, sida Isbitaalada, iskuulada, suuqyada iyo goobaha kale oo ay dadka isugu yimaadaan.
Qaar kamid ah Xildhibaanada Maraykanka ayaa bilaabay olole ay doonayaan in lagu joojiyo taageerada Maraykanka siiyo militariga Sacuudiga ololahaasi oo sii xoogeystay kadib dilkii Sacuudiga u geystay suxufi Jamal Khashoggi oo kamid ah dadka sida weyn u cambaareeya dagaalka ka socda wadanka Yemen oo uu sheegi jiray inuu yahay dagaal uu dabada ka riixayo Dhaxal-sugaha Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan.